विस्फोट कसले गराइरहेछ ? – Saurahaonline.com
विस्फोट कसले गराइरहेछ ?
काठमाडौँ, १७ मंसिर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरण निर्वाचन हुने राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लामा पटक–पटक विस्फोट भइरहदा पनि सरकार (गृह मन्त्रालय)ले विस्फोट कसले गराइरहेछ भनेर बताउन सकेको छैन ।
, यो आजकोकान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।